किन विदेश पलायन भइरहेछन् हजारौं नर्स ? « Pahilo News
किन विदेश पलायन भइरहेछन् हजारौं नर्स ?
प्रकाशित मिति : 29 January, 2020 7:43 am
काठमाडौं, १५ माघ । नर्सिङमा स्नातक गरेपछि चितवनकी रेस्मा लोहनीले जागिरका लागि थुप्रै अस्पताल धाएर मुस्किलले पाएको स्थानमा पनि मासिक छ हजार मात्र तलब पाएपछि अध्ययन गर्दाको सम्पूर्ण ऊर्जामा पानी खनियो ।
आफन्तको सोर्स लगाएर बसुन्धरास्थित एक अस्पतालमा बल्ल बल्ल पाएको जागिरबाट आउने तलबले गाडीभाडा र खाजा समेत नपुगेपछि उनी हाल अस्ट्रेलिया पुगेकी छन् ।
लोहनी जस्तै नर्सिङमा स्नातक सकेपछि सत्यम शर्माले पनि निक्कै मिहिनेत गरेपछि काठमाडौँका एक नर्सिङ कलेजमा जागिर पाइन् ।
पाँच वर्षसम्म काम गर्दा बल्ल १८ हजार रुपियाँ पुगेको तलबले जीविकोपार्जन सम्भव नभएपछि उनी पनि अहिले अमेरिका पुगेकी छिन् । यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । समाजमा निक्कै ‘आकर्षक’ देखिने नर्सिङ पेसाबाट उचित सेवा सुविधा नपाएपछि हजारौँ विदेश पलायन भएका छन् ।
नेपाली विशेष गरी नर्सहरू अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, कुवेत, साउदी लगायतका देशमा कार्यरत छन् । नेपाल नर्सिङ सङ्घकी कोषाध्यक्ष तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नर्सिङ क्याम्पसकी प्राध्यापक कल्पना श्रेष्ठले नेपालमा नर्सहरूलाई अवसरको खाँचो रहेको बताइन् ।
‘सुरुमा नर्स भन्ने वित्तिकै सेवा र अवसर पनि होला भनेर अध्ययन गर्ने गर्दछन्’, प्राध्यापक श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर अध्ययन सकेपछि कुनै अवसर नपाउँदा विदेशिने नर्सहरूको संख्या अत्यधिक छ ।’
कतिपय अस्पतालले सुरुमा स्वयं सेवक भई काम गरेपछि मात्र तलब दिने त्यो पनि आठ, १० हजार रुपियाँमा काम लगाउने गरेका छन् भन्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘नर्सिङ सङ्घ नेपालमै रोजगार र विभेदकारी व्यवस्थाको अन्त्यका लागि लडिरहेको छ ।
सचिवालयको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
चितवन,१६ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सचिवालयको निर्णय
आहा ! कालिञ्चोक ( दश फोटोमा हेर्नुहोस)
दोलखा,१६फागुन । आहा ! कालिञ्चोक दश फोटोमा हेर्नुहोस
काँग्रेसले क्रियाशील सदस्यता आठ लाख पुर्‍याउँदै
काठमाडौँ, १६ फागुन । नेपाली काँग्रेसले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि आजदेखि नयाँ क्रियाशील
काठमाडौँ, १६ फागुन । बालबालिकाको गुणस्तरीय सिकाइका लागि उनीहरुको सुरक्षा पहिलो शर्त भएकाले शिक्षाका कानून